I-Linear Motion Amaculo Ye-Robotic Positioning - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
NguLisa Eitel â € ¢ Amathrekhi we-Robot-positioning angangezela ukuguquguquka kwezikhala zokukhiqiza, kodwa kufanele abe esheshayo, enembile, futhi ephephile ukuba asebenzise ngempela. Lapha sibheka amashayela ahambisa.
Izindlela zokubeka i-robot ziyizingoma ezinde kumagumbi okugcina, i-aerospace, nezikhungo zokuhamba ngezimoto ukuze i-robot eyodwa isebenze imisebenzi eminingi. Ebizwa nangokuthi ama-robot-transfer units noma ama-RTUs, lezi zakhiwo zokunyakaza zivame ukuvame ukuhlangana, ukukhishwa okukhulu, nokugcinwa kwempahla.
Ngokuphambene namasethups ajwayelekile lapho i-robot ibhalela khona phansi, i-RTUs ihambisa ama-robot ngomsebenzi-amangqamuzana namafektri bese uwahambisa phakathi kweziteshi. I-setups engcono kakhulu ye-RTU yilabo abakhelwe nje kuphela noma lapho izinqubo nemishini ehlobene ingafakwa emgqeni oqondile. Lapho i-RTU ihambisa ama-robot ayisithupha, i-tracks ehambisanayo ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi i-axis yesikhombisa (noma ngaphansi kwalokho, uma i-robot ngokwayo inezinombolo eziyisikhombisa zenkululeko, i-axis axis). Uma lezi zithrekhi ziyingxenye yesikimu, kufaka phakathi amafele lapho i-robot ixhomeke khona, i-gantries.
Kungakhathaliseki ukuthi i-robot noma i-morphology ithrekhi, iphuzu le-axis eyengeziwe ukwengeza ukunyakaza kokuhumusha. Lokhu kuhlanganisa imvilophu yomsebenzi noma kuvumela umsebenzi wokuthutha we-robot-izingcezu noma amathuluzi. Kwamanye amalungiselelo, owokuqala uvumela i-robot ithathe imishini eminingi noma ukhethe amapellets kusuka emigqeni, noma umshini omkhulu kakhulu. Kulezi zinsuku, izicelo ezivamile zipakisha, ukuxhuma, ukusika kwe-plasma-arc, neminye imisebenzi yemishini.
Lapha sigxila ekukhethweni kokushayela ama-RTU. Kodwa-ke, phawula ukuthi onjiniyela kumele futhi banqume phakathi kweziqondiso eziningi kanye nezintambo (ngokuvamile ngesimo sabalandeli bekhamera noma iziqondiso zephrofayela).